चार दिनमै दोब्बर संक्रमण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
'संक्रमण बढे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड न सरकारबाट पालना गरिएको छ न त सर्वसाधारणबाट । अब रोक्ने एउटै उपाय जनस्वास्थ्यको मापदण्ड व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पालना गर्नु नै हो । जोखिममा जो छ, उनीहरूको निगरानी गर्ने हो । '
वैशाख ९, २०७८ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — मुलुकभर गत आइतबार १ हजार ९१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । चार दिनपछि बुधबार दोब्बरभन्दा बढी २ हजार ३ सय ५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ हजार ५२ जना छन् ।
केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्ने र बजेट नदिएकै कारण केही गर्न नसकेको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले बताए । आफ्नो नगरपालिकामा सुकुम्बासीका लागि भनेर बनाइएको ५ सय जना अट्ने यसअघि आइसोलेसन बनाइएको भवन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर एक गैरसरकारी संस्थालाई तीन वर्ष प्रयोग गर्न दिइसकेको उनले बताए । सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले राधास्वामी र वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘राधास्वामीको संरचनामा आइसोलेसन बनाउन चिठी पठाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘वीर अस्पतालको ५ सय जना अट्ने भवनको निर्माण सकिएकाले त्यहाँ पनि आइसोलेसन बनाउने कुरा भएको छ ।’
‘नियम मात्रै बनाएर पुग्दैन’
डा. शरद वन्त, जनस्वास्थ्य विज्ञ
दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको वृद्धिदर डरलाग्दो छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई पनि संक्रमण देखिएको छ । संक्रमण बढे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड न सरकारबाट पालना गरिएको छ न त सर्वसाधारणबाट । अब रोक्ने एउटै उपाय जनस्वास्थ्यको मापदण्ड व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पालना गर्नु नै हो । जोखिममा जो छ, उनीहरूको निगरानी गर्ने हो । उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो । अब सरकारले जतिसक्दो धेरैको परीक्षण गर्नुपर्छ । जोखिममा भएका सबैलाई परीक्षण गर्न जरुरी छैन, छानेर गर्न सकिन्छ । पहिचान भएका संक्रमितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । लक्षण छैन भने सामान्य आइसोलेसन संस्थागत वा घरमा राख्न सकिन्छ । आइसोलेसन राख्ने भनेको चाहिँ ऊबाट अरूलाई नसरोस् भन्नका लागि हो । सुरुमा लक्षण नदेखिन पनि सक्छ, बिस्तारै देखिन सक्छ । कतिपयलाई तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्ने हुन्छ ।
संक्रमितको निगरानी महत्त्वपूर्ण पाटो हो । अहिले त मास्क प्रयोग, संक्रमितको व्यवस्थापन, निगरानी र क्वारेन्टाइनको अवधारणा त हराइसक्यो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि हराइसक्यो । परीक्षण कसको भइरहेको छ ? उनीहरू को हुन् ? एन्टिजेन र पीसीआर कसको भइरहेको छ ? तथ्यांक छैन । पहिचानपछि सही व्यवस्थापन नभएसम्म संक्रमण घट्दैन । घरमा उपयुक्त हुँदैन भने संस्थागत आइसोलेसनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो पटक त सुरुमा सबैलाई संस्थागत आइसोलेसनमा राखिएको थियो । त्यसबेला आइसोलेसन सेन्टरहरू बनेकै थिए । यसपालि त कहींकतै भएको थाहा छैन । आइसोलेसन सेन्टर हुनैपर्छ । नियम, निर्देशिका बनाउनु मात्रै सरकारको काम होइन । नियम पालना गरिएको छ कि छैन भनेर निगरानी हुनुपर्छ ।
अन्तर बैंक दर बढे पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेकाले तरलता स्थिर भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने
वैशाख ९, २०७८ यज्ञ बञ्जाडे
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र बन्दै जाँदा त्यसको असर वित्तीय प्रणालीमा पनि देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह घटिनसके पनि नयाँ कर्जाको माग प्रभावित हुन थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।
लगानीकर्ताले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको प्रभाव आकलन गरेर बसेकाले उत्साहित रूपमा नयाँ कर्जा माग नआएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पछिल्ला दिनमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता स्थिर देखिनु यसकै संकेत हो,’ एक बैंकरले भने, ‘दुई/चार महिना अघिकै स्तरमा कर्जा माग भएको भए, अहिले तरलता अभाव भइसकेको हुन्थ्यो ।’
पछिल्ला दिनमा अन्तर बैंक दर बढे पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेकाले तरलता स्थिर भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अन्तर बैंक ब्याजदर १ देखि ५ प्रतिशतसम्म रहनु तरलता सामान्य भएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा माथि गयो भने तरलता अभाव भएको संकेत हो ।’ यसअघि तरलता अधिक हुँदा लामो समयसम्म अल्पकालीन ब्याजदर (अन्तर बैंक दर) १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणको असर कम हुँदै गएपछि कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि अन्तर बैंक दर पनि बढेर ५ प्रतिशत नजिक पुगेको थियो । यसअघि वित्तीय प्रणालीमा सवा २ खर्ब रुपैयाँसम्म अधिक तरलता थुप्रिएको थियो । त्यतिबेला भारित औसत अन्तर बैंक दर ०.२ प्रतिशत थियो । तरलता घट्दै गएपछि अन्तर बैंक दर पनि बढ्न थालेको हो ।
यही साता मात्र राष्ट्र बैंकले बजारबाट ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खरिद गरेको छ । उल्लिखित माध्यमबाट बजारमा मुद्रा आपूर्ति भएपछि तरलता सामान्य भएकाले अन्तर बैंक दर पनि घटेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको असर कति हुन्छ, त्यसकै आधारमा बैंकको व्यावसायिक विस्तार निर्धारण हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्यो भने अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको पहिलो असर बैंकमा पर्छ ।’ यद्यपि आजसम्म त्यसको असर देखिई नसकेको उनले दाबी गरे । चैतसम्म बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नै रहे पनि संक्रमण बढ्दै गएकाले त्यसको असर पर्न सक्ने उनको आकलन छ । अधिक तरलता सामान्य अवस्थामै रहेकाले तत्काल कर्जाको ब्याजदर नबढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
लकडाउनका कारण २०७६ चैतदेखि गत साउनसम्म कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै थियो । उक्त अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा पनि असुली भएपछि असारको तुलनामा साउनमा कुल कर्जा करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि भदौदेखि बढ्न थालेको कर्जा प्रवाहमा असोजमा राम्रै वृद्धि देखिएको थियो । जसअनुसार भदौमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ३४ अर्ब र असोजमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कात्तिकदेखि उच्च दरले बढ्न थालेको कर्जा मंसिर, पुस, माघ र फागुनसम्म पनि उस्तै गतिमा थियो । यस क्रममा गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ४० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल निक्षेप ४४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसअघि तरलता घट्दै गएकाले चैतपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने आकलन थियो । तर प्रक्षेपण गरिएअनुसार ब्याजदर बढेन । गत वर्षको उच्च ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको अवधि पूरा भएकाले बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा कमी आएको छ । यसकारण बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर बढेन ।
कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा दबाबमा रहेका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर केही बढाए पनि औसतमा ब्याजदर नबढेको बैंकरहरू बताउँछन् । आइतबारसम्म बैंकहरूको औसत सीसीडी अनुपात ७८.५३ प्रतिशत छ । लकडाउन खुलेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धेरै कर्जा सेयर बजारमा प्रवाह भएको छ ।
सेयर बजारमा आएको बढोत्तरीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो कर्जा मार्जिन लोन (सेयर कर्जा) मा गएको हो । बढ्दो बजारमा व्यक्तिगत ‘ओभरड्राफ्ट’ र ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्रमा गएको केही कर्जा पनि सेयर बजारमा गएको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । यद्यपि अधिकांश वित्तीय संस्थाको यो क्षेत्रमा प्रवाह गर्न पाइने अधिकतम सीमा पूरा भएको बताइएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ ०७:४२